Idolobha laseNapa Valley King Suite - I-Airbnb
Idolobha laseNapa Valley King Suite
609 okushiwo abanye
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-John
Itholakala maphakathi nedolobha laseNapa eduze nezindawo zokudlela ezihamba phambili emhlabeni, izindawo zewayini nezindawo! Ikhaya lethu lisanda kulungiswa futhi lilungele ukujatshulelwa ngokunethezeka kwe-premium. Umbhede uyiNdlovukazi ye-Tempur-Pedic ebiza kakhulu eyenza ubuthongo obukhulu kakhulu ngemva kokujabulela iwayini nokudla okunenani lezinsuku. Ikhaya lethu likhulu kakhulu phakathi kwedolobha futhi livunyelwe eDolobheni laseNapa nazo zonke ezinye izinyathelo zokuphepha okufanele ihhotela lizilandele. Thina (uJohn & Brad) sibheke ngabomvu ukukubamba!
*Igumbi lokuhlala/Igumbi lokudlala
*I-Cereal Bar, i-Claudio Special Blend Coffee, i-Toast & Jam ekhishini
4.86 out of 5 stars from 609 reviews
4.86 · 609 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-609
Izinsiza Zegumbi/ Zasekhaya
*I-iPad yokusebenzisa i-inthanethi kanye nekhebuli yokusakaza nge-Xfinity Stream APP
*I-Toast kanye namaJam
*Izindawo zokudlela kanye nezindawo zokuphuzela iwayini zigcwele ibanga phakathi kohambo lwemizuzu eyi-10 ukuya edolobheni.
*Ukushayela imizuzu emi-5 ukuya endaweni yewayini eseduze esifundeni saseCarneros.
*Ukufinyelela Kalula ku-HWY 29 ukuya eNyakatho kuya eCalistoga.
*Ukushayela imizuzu engu-20 ukuya e-Valejo Ferry Building ukuze ujabulele usuku e-San Francisco.
*Ibanga lokuhamba ngeMassage Parlors.
Ngitholakala ngomlayezo wombhalo kanye ne-AirBnB Messenger noma nini. Uzongibona usuku lonke ngingena ngiphuma endlini. Unganqikazi ukufinyelela uma unemibuzo endaweni yangakini kanye nento okumele uyenze. Ngiyakujabulela ukwenza isiqiniseko sokuthi isivakashi sami sinesipiliyoni esiyingqayizivele eNapaValley.
Ngincoma kakhulu ukuthi uhlole i-@NapaValleyGExperience njengesevisi ye-concierge ukuze ngikwethule okuhlangenwe nakho kwewayini lesitolo sendawo futhi siphakamise lokho okunikezwa yiNapa Valley.
Ngitholakala ngomlayezo wombhalo kanye ne-AirBnB Messenger noma nini. Uzongibona usuku lonke ngingena ngiphuma endlini. Unganqikazi ukufinyelela uma unemibuzo endaweni yangakini ka…